ko November 13, 2012 - 7:21 pm india has so many problem more than burma.
Reply mgmgzaw November 13, 2012 - 10:23 pm Oh, long life MOTHER SU.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 14, 2012 - 3:13 am အန်တီစုရေ … အရင် နိုင်ငံတွေမှာလဲ ဖြစ်ပြီးပြီ။ အခုလဲ ဖြစ်ပြီ။ လုံခြုံရေးကြောင့် လုပ်ရတာတွေ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တဲ့သူတွေကလဲ ကြိုချင်တာပေါ့။ ကြိုသူမရှိ၊ လူမသိ သူမသိဆိုရင် အန်တီစုက သူ့ကို မကြိုချင်ကြလို့လား အထင်လွဲမှာ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ သည်တော့ နောက်သွားမယ့် နိုင်ငံတွေမှာ ဗမာတွေ လာကြိုဘို့ နေရာလေး သတ်မှတ်၊ လုံခြုံရေးစစ်ထား၊ ခဏလေး ရပ်၊ ပြုံးပြ၊ ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံလောက် အရိုက်ခံလိုက်ရင်၊ ကိုယ့် ကင်မရာလေးနဲ့ ကိုယ် ပုံလေး ရိုက်ခွင့်ရရင် ၆ နာရီလောက် ကြိုပြီး လာစောင့်ရကျိုး နပ်မှာပါ။ ချစ်လွန်းလို့ ကြိုချင်တာပါရှင်။
Reply komoe November 20, 2012 - 10:36 pm မြန်မာ့အရေးအမျိုးသားအရေးမို့အမေစုအပင်ပန်းအဆင်းရဲခံ ပီးတိုင်းပြည် ကောင်းစာ